စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 35m - တရုတ် Qingdao CO-NELE Group မှ
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13963912630
ဖုန်းနံပါတ်: +86 18306398869
E-mail ကို: cassie@conele.com
E-mail ကို: bob@conele.com
trailer ကွန်ကရစ် pump
ကွန်ကရစ် Place Boom
47m Boom Pump Truck ကား
ကားတစ်စီး QSP30A ပက်ဖြန်း Shotcrete
စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 44m
စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 37m
စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 35m
စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 33m
1.EquipΦ230mmဆလင်ဒါ, ကြီးမားတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခံရချပေးစနစ်, ပစ္စည်းစုပ်ယူမှုထက်ပို 88% ဖြစ်ပါသည်, တူရွှေ့ပြောင်းခံရနှင့်အတူအသွားအပြန်၏နံပါတ်နိမ့်သည်ကို၎င်း, ဝတ်ထားအစိတ်အပိုင်းများဘဝရှည်လျားသည်,
2.The မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း system ကိုအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်အသွားအပြန်ချမှတ်။ အဆိုပါမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအသွားအပြန် system ကိုသက်ရောက်မှုများအတွက်, မြန်ဆန်တိကျသေးငယ်သည်နှင့်အမှန်တကယ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းထိရောက်မှုသမရိုးကျဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်ထားအသွားအပြန် system ကိုကျော်ထက်ပိုမို 7% တိုးပွားလာနေသည်။
အဆို့ရှင်ပေါင်းစည်း 3.Adopts စက်မှုဇုန်ကြီးမားသောစုပ်စက်ထရပ်ကား, လိုင်း 17% ချွေတာသမရိုးကျအဆို့ရှင်စွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ဖိအားအရှုံးသေးငယ်သည်, ရိုးရှင်းပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များတွင်အပူမှကျရောက်နေတဲ့မရှိကြပေ။
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 5000-100000 / set ကို
Min.Order အရေအတွက်: 1set
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် set 300 /
စွမ်းဆောင်ရည်ချပေးမက်စ်: 111m3 / ဇ
မက် Output ဖိအား: 9.5Mpa
မက်စအချိန်ချပေး: 32t / မိနစ်
။ Delivery Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ230 * 1400mm
ကိုသတ်ရ Angle: 270 °±
စန်းဖွဲ့စည်းပုံ: 5RZ (1000Mpa သံမဏိပြား)
အမြင့် အနိမ့်ဖိအားပြောင်းလဲမည်: အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်အော်တို
Chassis ကိုအမှတ်တံဆိပ်: SINOTRUCK HOWO
Max. Theor. output(high/low pressure) မီတာ3/h 66/111
Hopper capacity L ကို 600
Filling height မီလီမီတာ 1400
Oil cylinder dia.×stroke မီလီမီတာ φ125×1400
Concrete cylinder dia.×stroke မီလီမီတာ φ230×1400
Max. aggregate dimension မီလီမီတာ 40
Placing depth မီတာ 35
Horizontal distance မီတာ 31
Placing depth မီတာ 24
Pipe diameter မီလီမီတာ 125
End hose length မီလီမီတာ 3000
Min. height of opening placing boom မီလီမီတာ 9000
Outriggers span (front×rear×side) မီလီမီတာ 6140×7098×6706
Wheelbase မီလီမီတာ 5600
Oil tank cubage L ကို 400
Overall dimensions မီလီမီတာ 9930x2496x3880
Oil tank volume L ကို 500
Water tank volume L ကို 400
ယခင်: စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 33m
နောက်တစ်ခု: စန်းပွစုပ်စက်ထရပ်ကား howo 37m
18m ကွန်ကရစ် Boom Pump
27 M က Truck ကားကွန်ကရစ် Boom pump တပ်ဆင်ထား
32m ကွန်ကရစ် Pump Truck ကားစန်းထုတ်လုပ်သူ
တရုတ်ခုနှစ်တွင် 42m Boom ကွန်ကရစ် pump Truck ကားစေ
Boom Pump Truck ကား
Pump ကုန်ကား Boom
စန်းချပေး Truck ကား
ကွန်ကရစ် စန်းပွ Pump
ကွန်ကရစ်စန်း Pump Truck ကားစက်ရုံ
ကွန်ကရစ် Boom Pump Truck ကားရောင်းရန်
ကွန်ကရစ် Boom pump
ကွန်ကရစ် Boom ရောင်းရန်ညှစ်ထုတ်လိုက်
ကွန်ကရစ် Pump Boom
ကွန်ကရစ် pump Place Boom
ကွန်ကရစ် Pump Truck ကားစန်း
Boom အတူကွန်ကရစ် pump
မိုဘိုင်း Truck ကားကွန်ကရစ်စန်း Pump
Truck ကားစန်း Pump
Truck ကား Boom pump
Truck ကားကွန်ကရစ် Pump စန်းတပ်ဆင်ထား
Truck ကားကွန်ကရစ် Pump တပ်ဆင်ထား Boom နေရာယူခြင်း
Adress: Yuhuangling စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအိမ်ရာ, Chengyang ခရိုင် # 413, Qingdao စီးတီးတရုတ်
ဖုန်းနံပါတ် / Whatsapp: +86 13963912630
ဖုန်းနံပါတ် / Whatsapp: +86 18306398869